Agreedo: Kuita Misangano Kubudirire | Martech Zone
Svondo, October 9, 2011 Svondo, October 9, 2011 Douglas Karr
Pandaishandira kambani hombe yesoftware, ndakambomira kuenda kumisangano semuyedzo. Chikwata Chezvigadzirwa Management chaive nemisangano yakarongwa vhiki rese uye dzimwe nguva maawa masere akazara pazuva… kusangana nevatengi, kutengesa, kushambadzira, kusimudzira, nerutsigiro Yakanga yakapenga. Kwaive kupenga nekuti sangano raida kusangana asi harina kumbobata vashandi vavo vanozvidavirira kuzadzisa chero chinhu nemusangano.
Saka, kwemavhiki maviri handina kuenda kumusangano mumwe chete. Vanhu vakaita kudaro vaitaura kuti ini ndanga ndisipo, vamwe vandaishanda navo vaiseka kana kutsamwa nezvazvo… asi pakupedzisira, mukuru wangu panguva iyoyo haana kuita hanya nazvo. Iye haana kuita hanya nekuti yangu kugadzirwa kunowedzera zvakanyanya. Dambudziko raive rekuti misangano yaiomesesa sangano… uye yaindiremadza. Sei? Zvichitaurwa zviri nyore - vanhu havana kumbobvira vadzidziswa kuti vaitise musangano riini kana kuti vangave nemusangano unobudirira Nehurombo, hachisi chinhu chavanodzidzisa kukoreji.
Nda yakanyorwa nezve misangano zvishoma ... ivo peturu peeve yangu. Ndakatoita presentation yekuti misangano yaive nemhosva yekufa kwekugadzirwa kweAmerica. Ichi chimwe chikonzero nei ndichida a Mhedzisiro Chete Nharaunda Yekushanda. Kana misangano isina kunyatsorongwa uye kurongwa, iwo marara anoshamisa enguva yemunhu wese. Kana uine vanhu vashanu mukamuri pane imwe kambani, mikana ndeyekuti misangano yako iri kuita madhora mazana mashanu paawa. Iwe ungadai uine vakawanda here kana iwe ukafunga nezvazvo nenzira iyoyo?
Iye zvino panogona kuve nehunyanzvi hungabatsira sangano rako. BvumiranaiDo isoftware yemahara sevhisi (SaaS) yekushandisa iyo inoita kuti iwe uve nechokwadi chekuti misangano yako yakarongedzwa zvakanaka, mhedzisiro-yakatarisana, inobatsirana uye kunyanya - inobereka.
Musangano usati waitwa: KubvumiranaDo kunokubatsira iwe kugadzira ajenda dzemisangano. Rega vese vatori vechikamu vabatsirane pane ajenda musangano usati wasvika, kuitira kuti munhu wese agadzirire.
Panguva yemusangano: Kunyangwe uri musangano wenguva dzose, kana hurukuro yekushambadzira, tora maminetsi ako emusangano uchishandisa AgreeDo. Iyo inokubatsira iwe kubata nyore nyore ese akakosha nyaya senge mabasa, sarudzo, kana kungori zvinyorwa.
Mushure memusangano: Tumira maminetsi emusangano kune vese varipo uye ubatsirane pane zvabuda. AgreeDo inobatsira iwe kuteedzera mabasa uye kuronga nyore nyore yekutevera-misangano.
The interface of BvumiranaiDo zvine mhedzisiro:
Uye iwe unogona kutarisa yako yemisangano mabasa chero nguva mukati meiyo interface:
Kana kambani yako iri kutambura musangano uye inoda kumwe kubatsirwa, kusundira vashandi vako kushandisa AgreeDo kunogona kutendeutsa sangano rako! Bhalisa kune AgreeDo zvemahara.
Tags: kusuruvararunyararokuchengetedzwareKurambamutsara wenyaya
Iko Kunoshandisa Vanhu Mafoni Avo